चितवनमा पहिलो पटक गरियो प्लाज्मा थेरापीका लागि रक्तदान – Health Post Nepal
२०७७ भदौ १८ गते १९:००
चितवनमा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापीका लागि रक्तदान गरिएको छ । क्षेत्रिय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका अनुसार, आज (बिहिवार) भरतपुरमा कोरोना सक्रमणबाट निको भएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका कृषि अधिकृत माधव पौडेलले रक्तदान गरेर उद्घाटन गरेका हुन्।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम रक्तदान गर्दा फरक नपर्ने भएकाले कोरोना संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिलाई रक्तदान गर्न अनुरोध गरेका छन्।
प्लाजमा थेरापीका लागि रगत दिन पाउँदा आफु खुशी भएको बताए उनले स्वास्थ्यकर्मी सवैलाई एउटै किसिमको सेवा दिन समेत आग्रह समेत गरे ।
आज पहिलो दिन तीन जनाले प्लाज्मा थेरापीका लागि रक्तदान गरेका छन । रक्तदान गर्नेमा स्थायी घर बाग्लुङ भई भरतपुर बस्दै आएका ३५ बर्षिय माधव पौडेल, देवघाटका ३० बर्षिय अनुप मैनावति, हेटौडा ११का रतन बहादुर महतरा रहेका छन्।
‘प्लाज्मा दान गरौँ कोराना संक्रमितको जीवन बचाऔँ’ भन्ने नाराका साथ गरिएको कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा.भोजराज अधिकारीको अध्यक्षता रहेको थियो । डा. अधिकारीले कोभिड संक्रमित भई आइसोलेसनबाट निको भएकाले १४ दिनपछि रगत दिन सक्ने बताए ।
फिजिसिन समेत रहेका अध्यक्ष डा. अधिकारीले जटिल प्रकारका संक्रमितको सख्या बढिरहेकाले समयमा रक्तदानले प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्न सहज हुने बताए । साथै उनले प्लाज्मा थेरापीका लागि रक्तदान गर्ने व्यक्तिलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।
निको भएकाहरूको रगतको प्लाज्मामा भाइरसविरुद्ध बनेका एन्टिबडीलाई अरू बिरामीमा प्रयोग गरिन्छ । भरतपुर अस्पतालले प्लाज्मा थेरापीका लागि रक्तदान गर्न अपिल गरेको छ ।
कसरी दिइन्छ प्लाज्मा थेरापी ?
प्यासिभ एन्टिबडी थेरापी भनेको एक व्यक्तिमा बनिसकेको एन्टिबडी अर्को व्यक्तिलाई दिनु हो । अठार वर्ष उमेर माथिका व्यक्तिले रगतको प्लाज्मा दिन सक्छन् ।
रगतमा भएको सेतो कोष हटाएर बनेको झोल पदार्थ नै प्लाज्मा रहेको क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्दका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलले जानकारी दिए।
अस्पतालले प्लाज्मा थेरापीबाट सङ्क्रमितको उपचारका लागि तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्लाज्मा थेरापीका लागि सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा गोपालप्रसाद पौडेललाई तोकिएको छ ।
कोरोनाभाइरस सक्रमित केही व्यक्ति उक्त विधिबाट उपचार गराई निको भएपछि यो विधिबाट उपचार गर्न देशका विभिन्न अस्पताललाई सरकारले अनुमती दिएको छ ।